Phimosis and Paraphimosis - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
လိငျအင်ျဂါအရပွေား နောကျသို့ ဆှဲခြ၍ မရခွငျး လိငျအင်ျဂါ နှငျ့ အရပွေားကိုပုံမှနျ နရောမှနျရောကျအောငျ ပွနျဆှဲမခနြိုငျခွငျး
ရာသီဥတု ပူအိုကျတဲ့ ညနခေနျးတဈခုမှာ ပိုငျနီမောငျတဈယောကျ ဆေးခနျးထိုငျနရေငျး သားအမိနှဈယောကျဆေးခနျးလာပွပါလရေဲ့..
မေ – ကြှနျမသားလေးရဲ့ ငယျပါထိပျက ယောငျနတေယျ.. ပွီးတော့ နာနတေယျလို့ ပွောတယျ ဆရာ… ဆီးသှားတဲ့အခါမှာလဲ ထိပျလေးက အရမျးဖောငျးလာလို့ စိုးရိမျလို့ လာပွတာပါ…
အျော အငျး.. ထိုငျပါဦး… ကလေးကို စမျးသပျကွညျ့ပါရစေ…
ပိုငျ – ဟုတျပ..အမရေေ… ကလေးရဲ့ ငယျပါ ထိပျလေးက ယောငျနတေယျ..ပွီးတော့ နာတယျဆိုတော့… ဒါမြိုးက တခြို့လူတှမှော ဖွဈတတျတဲ့ ‘ငယျပါ’အပျေါက အရပွေားကို ဆှဲခလြို့ မရခွငျး(phimosis)လို့ ချေါတာမြိုး ဖွဈနတေတျတယျ….
မေ -စိုးရိမျရလား ဆရာ
ပိုငျ – ဒီလိုတော့ ရှိတယျ… ကလေးရဲ့ အသကျရယျ.. ငယျပါထိပျက ဘယျလောကျထိ ပိတျနလေဲ… ဘယျလို လက်ခဏာတှေ ရှိလဲ ပျေါမှာ မူတညျတယျ…
ဒီလို ငယျပါထိပျအရပွေားကို နောကျကိုဆှဲခမြရတာဟာ ပုံမမှနျတာတဈခုကွောငျ့ ဖွဈနိုငျသလို တခြို့မှာလဲ အသကျ ငယျတုနျးမို့ အရပွေားကို နောကျကို ဆှဲခမြရတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ …တခြို့ယောကျြားလေးတှမှောဆိုရငျ အသကျ ၁၇ နှဈထိလောကျ ဖွဈတတျတယျ… အဲ့ထကျကွီးတဲ့ ယောကျြားလေးတှဆေိုရငျတော့ ဆရာဝနျနဲ့ ပွသကွညျ့သငျ့တယျ…
မေ – ဒါဆို ကြှနျမကလေးက ခု အသကျဆယျနှဈဆိုတော့ စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပေါ့နျော..
ပိုငျ – အဲ့လိုတော့ ပွောရမှာပေါ့..
မေ – ဒါဆို ဒီကွားထဲမြား ကလေးနမေကောငျးမှာစိုးတော့ သတိထားသငျ့တဲ့ ” လက်ခဏာ”လေးတှေ ပွောပွပါလား… ဆရာ
ပိုငျ – ဆီးပေါကျတဲ့အခါမှာ အရပွေားထိပျလေးက ပူဖောငျးလို အရမျးဖောငျးနမေယျ…ပွီးရငျ ဆီးခြောငျးကလညျး ပုံမှနျထပျ သေးမယျနညျးမယျ…. ဆီးထဲမှာ သှေးပါလာတာတို့ ဖွဈတတျတယျ…
ဒါ့ပွငျ အရပွေားထိပျမှာ အရမျးပိတျနတေော့ ရောဂါပိုးဝငျပွီး ဆီးသှားတဲ့အခါ ဆီးကဉျြမယျဆီးပူမယျ..ဗိုကျအောကျပိုငျးတှေ နာမယျ.. ဆီးအိမျထဲ ဆီးမရှိပမေယျ့ စိတျထဲမှာ ဆီးသှားခငျြသလို ဖွဈနမေယျ… ငယျပါထိပျအရပွေားမှာ အဖွူရောငျအမာရှတျလို ကှငျးလေး တှရေ့တတျတယျ…
အသကျကွီးတဲ့အမြိုးသားတှမှော အရပွေားထိပျမှာ နာတာမြိုးရှိမယျ .. တခါတလမှော.. ထိပျကနေ အကြိအခှဲတြှေ ပါလာတတျတယျ…လိငျဆကျဆံတဲ့ အခါမှာလဲ နာကငျြတာမြိုး ရှိတတျတယျ…
မေ – ဆရာ ပွောသှားသလိုဆို အသကျကွီးတဲ့ သူတှမှောလဲ ဖွဈတာပေါ့နျော..
ပိုငျ – ဒါပေါ့ … ဒါပမေယျ့ အသကျကွီးတဲ့ လူတှမှော အဖွဈမြားတာကတော့ paraphimosis လို့ချေါတယျ…
” သူက တူမလိုနဲ့ ကှဲပွားတယျ”…အရပွေားထိပျကို ဖွတျထားခွငျး မရှိတဲ့၊အရပွေားသာမနျထပျပိုရှညျတဲ့သူတှမှော ဖွဈတတျတယျ… အရပွေားထိပျကို နောကျကိုဆှဲပွီး ပုံမှနျနရောမှနျ ပွနျမရောကျပဲ ပွနျမဆှဲခနြိုငျတော့တာ ကနျြနတေတျတာမြိုးပေါ့.. ဒီအခါမှာ ငယျပါထိပျရယျ အရပွေားရယျဟာ ယောငျလာမယျ..နာလာမယျ.. သှေးမရောကျတော့ပဲ ညိုပုပျလာတတျတယျ
အရပွေားထိပျကို အားနှငျ့ နောကျသို့ ဆှဲခထြားဖူးခွငျး
အရပွေားထိပျဟာ သာမနျထကျ ပိုပီး တငျးကွပျနခွေငျး
အရပွေားထိပျကို အနောကျသို့ အခြိနျကွာကွာဆှဲခထြားခွငျး စတဲ့သူတှမှော ပိုအဖွဈမြားတယျ
မေ – ဒါဆို စိုးရိမျရတာပေါ့နျော ဆရာ..
ပိုငျ – ဒါပေါ့ ဒီ paraphimosis ကတော့ စိုးရိမျရတယျ…
မေ – ကုလို့ကော ရလား ဆရာ ..
ပိုငျ – ရပါတယျ… အဲ့နရောတဈဝိုကျကို ရခေဲအုပျထားနိုငျတယျ သှေးတှေ ပွညျတှေ ရှိရငျ စုတျထုတျရမယျ ယောငျတာကို သကျသာအောငျ ဆေးထိုးပေးလို့ရတယျ၊ဆေးလိမျးလို့ရတယျ
ဒါတှလေုပျပီးလို့ သကျသာသှားရငျ၊အယောငျကသြှားရငျ ထိပျအရပွေားကို ပုံအမှနျနရောရောကျအောငျ ပွနျလုပျပေးမယျ..ဒီအခါမှာ အရမျးနာကငျြတတျတာမို့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေးတှေ ကွိုသောကျထားသငျ့တယျ
ဒါမှမဟုတျပဲ မသကျသာခဲ့ရငျ ခှဲစိတျမှု ပွုလုပျရတတျတယျ…. လိငျအင်ျဂါအရပွေားထိပျကို လှီးဖွတျပွီး(circumcisionလုပျပွီး) ကုသရတတျတယျ…ဒီလို လုပျခွငျးအားဖွငျ့ နောကျတဈခါ ထပျဖွဈဖို့ ကာကှယျပွီး ဖွဈသှားမယျ…
မေ – ဒါဆို ခု ကြှနျမရဲ့သားလေးက အရမျးလဲ မဆိုးဘူးဆိုတော့ သခြောဂရုစိုကျရငျ ရပီပေါ့နျော…
ပိုငျ – အငျး ဒီလိုပွောရမှာပေါ့..
ဒါပမေယျ့ သူရဲ့ ထိပျအရပွေားလေးဟာ သာမနျထကျ ပိုရှညျနရေငျ …
ဆီးသှားတာ ပုံမှနျ လား …
ယားယံမှု ၊နာကငျြမှုရော ရှိလား
အစရှိတာတှကေိုတော့ သတိပွုရမယျနော့…ဒီကွားထဲမှာ ပွောခဲ့တဲ့ လက်ခဏာတှေ တှရေ့တယျဆိုရငျလဲ ဆရာဝနျနဲ့ အမွနျဆုံးပွသငျ့တယျ..
မေ – ကြေးဇူးပါ ဆရာရယျ..
လိင်​အင်္ဂါအ​ရေပြား နောက်​သို့ ဆွဲချ၍ မရခြင်း လိင်​အင်္ဂါ နှင့် အ​ရေပြားကိုပုံမှန်​ ​နေရာမှန်​​ရောက်​​အောင်​ ပြန်​ဆွဲမချနိုင်​ခြင်း
ရာသီဥတု ပူအိုက်​တဲ့ ည​နေခန်းတစ်​ခုမှာ ပိုင်​နီ​မောင်​​တစ်​​ယောက်​ ​ဆေးခန်းထိုင်​​နေရင်း သားအမိနှစ်​​ယောက်​​ဆေးခန်းလာပြပါ​​လေရဲ့..
မေ - ကျွန်​မသား​​လေးရဲ့ ငယ်​ပါထိပ်​က ​ယောင်​​နေတယ်​.. ပြီး​တော့ နာ​နေတယ်​လို့ ​ပြောတယ်​ ဆရာ... ဆီးသွားတဲ့အခါမှာလဲ ထိပ်​​လေးက ​အရမ်း​ဖောင်းလာလို့ စိုးရိမ်​လို့ လာပြတာပါ...
​အော်​ အင်း.. ထိုင်​ပါဦး... က​လေးကို စမ်းသပ်​ကြည့်​ပါရ​စေ...
ပိုင်​ - ဟုတ်​ပ..အ​မေ​ရေ... က​လေးရဲ့ ငယ်​ပါ ထိပ်​​လေးက ​ယောင်​​နေတယ်​..ပြီး​တော့ နာတယ်​ဆို​တော့... ဒါမျိုးက တချို့လူ​တွေမှာ ဖြစ်​တတ်​တဲ့ 'ငယ်​ပါ'​အ​ပေါ်က အ​ရေပြားကို ဆွဲချလို့ မရခြင်း(phimosis)လို့ ​ခေါ်တာမျိုး ဖြစ်​​နေတတ်​တယ်​....
မေ -စိုးရိမ်​ရလား ဆရာ
ပိုင်​ - ဒီလို​တော့ ရှိတယ်​... က​လေးရဲ့ အသက်​ရယ်​.. ငယ်​ပါထိပ်​က ဘယ်​​လောက်​ထိ ပိတ်​​နေလဲ... ဘယ်​လို လက္ခဏာ​တွေ ရှိလဲ ​ပေါ်မှာ မူတည်​​​တယ်​...
ဒီလို ငယ်​ပါထိပ်​အ​ရေပြားကို ​နောက်​ကိုဆွဲချမရတာဟာ ​​ပုံမမှန်​တာတစ်​ခုကြောင့်​ ဖြစ်​နိုင်​သလို တချို့မှာလဲ အသက်​ ငယ်​တုန်းမို့ အ​ရေပြားကို ​နောက်​ကို ဆွဲချမရတာမျိုး ဖြစ်​တတ်​ပါတယ်​ ...တချို့​ယောကျာ်း​လေး​တွေမှာဆိုရင်​ အသက်​ ၁၇ နှစ်​ထိ​လောက်​ ဖြစ်​တတ်​တယ်​... အဲ့ထက်​ကြီးတဲ့ ​ယောကျာ်း​လေး​တွေဆိုရင်​​တော့ ​ဆရာဝန်​နဲ့ ပြသကြည့်​သင့်​တယ်​...
​မေ - ဒါဆို ကျွန်​မက​လေးက ခု အသက်​ဆယ်​နှစ်​ဆို​တော့ ​စောင့်​ကြည့်​ရဦးမှာ​ပေါ့​နော်​..
ပိုင်​ - အဲ့လို​တော့ ​ပြောရမှာ​ပေါ့..
​​မေ - ဒါဆို ဒီကြားထဲများ က​လေး​နေမ​ကောင်းမှာစိုး​တော့ သတိထားသင့်​တဲ့ " လက္ခဏာ​"​လေး​တွေ ​ပြောပြပါလား... ဆရာ
ပိုင်​ - ဆီး​ပေါက်​တဲ့အခါမှာ အ​ရေပြားထိပ်​​လေးက ပူ​ဖောင်းလို အရမ်း​ဖောင်း​နေမယ်​...ပြီးရင်​ ဆီး​ချောင်းကလည်း ပုံမှန်ထပ်​ ​သေးမယ်​နည်းမယ်​.... ဆီးထဲမှာ ​သွေးပါလာတာတို့ ဖြစ်​တတ်​တယ်​...
ဒါ့ပြင်​ အ​ရေပြားထိပ်​မှာ အရမ်းပိတ်​​နေ​တော့ ရောဂါပိုးဝင်​ပြီး ဆီးသွားတဲ့အခါ ဆီးကျဉ်​မယ်​ဆီးပူမယ်​..ဗိုက်​​အောက်​ပိုင်း​တွေ နာမယ်​.. ဆီးအိမ်​ထဲ ဆီးမရှိ​ပေမယ့်​ စိတ်​ထဲမှာ ဆီးသွားချင်​သလို ဖြစ်​​နေမယ်​... ငယ်​ပါထိပ်​​အ​ရေပြားမှာ အဖြူ​ရောင်​အမာရွတ်​လို ကွင်း​လေး ​တွေ့ရတတ်​တယ်​...
အသက်​ကြီးတဲ့အမျိုးသား​တွေမှာ အ​ရေပြားထိပ်​မှာ နာတာမျိုးရှိမယ်​ .. တခါတ​လေမှာ.. ထိပ်​က​နေ အကျိအချွဲ​တွေ ​ပါလာတတ်​တယ်​...လိင်​ဆက်​ဆံတဲ့ အခါမှာလဲ နာကျင်​တာမျိုး ရှိတတ်​တယ်​...
​မေ - ဆရာ ​ပြောသွားသလိုဆို အသက်​ကြီးတဲ့ သူ​တွေမှာလဲ ဖြစ်​တာ​ပေါ့​နော်​..
ပိုင်​ - ဒါ​ပေါ့ ... ဒါ​ပေမယ့်​ အသက်​ကြီးတဲ့ လူ​တွေမှာ အဖြစ်​များတာက​တော့ paraphimosis လို့​ခေါ်တယ်​...
" သူက တူမလိုနဲ့ ကွဲပြားတယ်​"...အ​ရေပြားထိပ်​ကို ဖြတ်​ထားခြင်း မရှိတဲ့၊အ​ရေပြားသာမန်​ထပ်​ပိုရှည်​တဲ့သူ​တွေမှာ ဖြစ်​တတ်​တယ်​... အ​ရေပြားထိပ်​ကို ​နောက်​ကိုဆွဲပြီး ပုံမှန်​နေရာမှန်​ ပြန်​မ​ရောက်​ပဲ ပြန်​မဆွဲချနိုင်​​တော့တာ ကျန်​​နေတတ်​တာမျိုး​​ပေါ့.. ဒီအခါမှာ ငယ်​ပါထိပ်​ရယ်​ အ​ရေပြားရယ်​ဟာ ​ယောင်​လာမယ်​..နာလာမယ်​.. ​သွေးမ​ရောက်​​တော့ပဲ ညိုပုပ်​လာတတ်​တယ်​
အ​ရေပြားထိပ်​ကို အားနှင့်​ ​နောက်​သို့ ဆွဲချထားဖူးခြင်း
အ​ရေပြားထိပ်​ဟာ သာမန်​ထက်​ ပိုပီး တင်းကြပ်​​နေခြင်း
အ​ရေပြားထိပ်​ကို အ​နောက်​သို့ အချိန်​ကြာကြာဆွဲချထားခြင်း စတဲ့သူ​တွေမှာ ပိုအဖြစ်​များတယ်
​မေ - ဒါဆို စိုးရိမ်​ရတာ​ပေါ့​နော်​ ဆရာ..
ပိုင်​ - ဒါ​ပေါ့ ဒီ paraphimosis က​တော့ စိုးရိမ်​ရတယ်​...
​မေ - ကုလို့​ကော ရလား ဆရာ ..
ပိုင်​ - ရပါတယ်​... အဲ့​နေရာတစ်​ဝိုက်​ကို ​ရေခဲအုပ်​ထားနိုင်​တယ်​ ​သွေး​တွေ ပြည်​​တွေ ရှိရင်​ စုတ်​ထုတ်​ရမယ်​ ​ယောင်​တာကို သက်​သာ​အောင်​ ​ဆေးထိုး​ပေးလို့ရတယ်၊​ဆေးလိမ်းလို့ရတယ်​
ဒါ​တွေလုပ်​ပီးလို့ သက်​သာသွားရင်​၊အ​ယောင်​ကျသွားရင်​ ထိပ်​အ​ရေပြားကို ပုံအမှန်​​နေရာ​ရောက်​​အောင်​ ပြန်​လုပ်​​ပေးမယ်​..ဒီအခါမှာ အရမ်းနာကျင်​တတ်​တာမို့ အကိုက်​အခဲ​ပျောက်​​ဆေး​တွေ ကြို​သောက်​ထားသင့်​တယ်​
ဒါမှမဟုတ်​ပဲ မသက်​သာခဲ့ရင်​ ခွဲစိတ်​မှု ပြုလုပ်​ရတတ်​တယ်​.... လိင်​အင်္ဂါအ​ရေပြားထိပ်​ကို လှီးဖြတ်​ပြီး(circumcisionလုပ်​ပြီး) ကုသရတတ်​တယ်​...ဒီလို လုပ်​ခြင်းအားဖြင့်​ ​နောက်​တစ်​ခါ ထပ်​ဖြစ်​ဖို့ ကာကွယ်​ပြီး ဖြစ်​သွားမယ်​...
​မေ - ​ဒါဆို ခု ကျွန်မရဲ့ ​​​သား​လေးက အရမ်းလဲ မဆိုးဘူးဆို​တော့ ​​​သေချာဂရုစိုက်​ရင်​ ရပီ​ပေါ့​နော်​...
ပိုင်​ - အင်း ဒီလို​ပြောရမှာ​ပေါ့..
ဒါ​ပေမယ့်​ သူရဲ့ ထိပ်​အ​ရေပြား​လေးဟာ သာမန်​ထက်​ ပိုရှည်​​နေရင်​ ...
ဆီးသွားတာ ပုံမှန်​ လား ...
ယားယံမှု ၊နာကျင်​မှု​ရော ရှိလား
အစရှိတာ​တွေကို​တော့ သတိပြုရမယ်​​နော့...ဒီကြားထဲမှာ ​ပြောခဲ့တဲ့ လက္ခဏာ​တွေ ​တွေ့ရတယ်​ဆိုရင်​လဲ ဆရာဝန်​နဲ့ အမြန်​ဆုံးပြသင့်​တယ်​..
​​မေ - ​ကျေးဇူးပါ ဆရာရယ်​..